प्रचण्ड र देउवाविच फेरी लफडा, सरकार ढालिदिने प्रचण्डको चेतावनी – Dainik Samchar
प्रचण्ड र देउवाविच फेरी लफडा, सरकार ढालिदिने प्रचण्डको चेतावनी
August 13, 2021 318
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच लफडा सुरु भएको छ । देउवाले प्रचण्डको बारेमा गोप्य कुरा बाहिर ल्याएपछि गठबन्धनमा लफडा भएको हो ।
प्रचण्डको अगाडी भएको अनौपचारिक कुराहरुको बारेमा देउवाले भन्दै हिडेपछि लफडा भएको हो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीको विषय नसमेटिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलोचना गरेपछि देउवाले प्रचण्डका कारण एमसीसी नसमेटिएको बताएका थिए ।
दुइ दिन अघि संसदको रोस्टमबाट सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले एमसीसीको बारेमा सरकारको धारणा के हो ? भनेर सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीबारे प्रचण्डले राख्न नमानेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, एमसीसी समेट्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तयार नभएको बताएका छन् ।
प्रचण्ड तयार नभएपछि न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसीबारे केही उल्लेख नगरिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेसका संस्थापन पक्षीय पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको भेलामा उपसभापति विमेन्द्र निधिले एमसीसीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
‘एमसीसी र हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको बारेमा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा केही समेटिएन किन रु’, निधिको प्रश्न थियो । जवाफमा देउवाले भने, ‘राख्न खोजेको हो । तर प्रचण्डले मानेनन् ।’
निधिले भने पार्टीले गरेको स्थलगत रिपोर्टको प्रतिवेदनले चीन तर्फबाट सीमा अतिक्रमण भएको देखिएकाले यसबारे बोल्नुपर्नेमा जोड दिए । भेलामा काँग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही पनि उपस्थित थिए ।
उनले पनि चीनले सीमा मिचिएको तथ्य झुटो सावित भए राजनीति छोड्ने बताए । तर देउवा भने यसबाट पन्छिने प्रयास गरे । ‘राख्न खोजेको हो, प्रचण्डले मानेनन्’, प्रधानमन्त्री देउवाको जवाफ थियो ।
स्रोतका अनुसार, निधि र शाहीले प्रश्न उठाएपछि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । उनले यसबारे सरकारले उच्चस्तरीय टोली नै बनाएर काम अगाडि बढाउने बताए ।
प्रचण्ड संशोधन विना एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिदै आएका छन् । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पनि प्रचण्ड एमसीसी संशोधन विना अनुमोदन गर्ने पक्षमा थिएनन् । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुमोदनको पक्षमा थिए ।मोटिभेट न्यूजबाट
Prevकाठमाडौँबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको बसमा चेक जाँच गर्दा प्रहरीको उड्यो होस् !
Nextचर्चामा युएसबी कण्डम : के हो यो ? यसले के काम गर्छ ? कसरी प्रयोग गर्ने ?
रोकिराखेको ट्रयाक्टरमा मोटरसाइकल ठो`किँ`दा सैनिक जवानको मृ`त्यु
अक्सिजन अभावकै कारण ठुला ठुला भनिएका अस्पतालले पनि कोरोनाका बिरामीलाई भर्ना लिन छाडे,अक्सिजन हेर्दै ज्यान गुमाउदै छन् कति पए संक्रमित
जनता टाइम्सका संपादक शान्तिराम कार्कीको निधन (1156)
बच्चा जन्माएको भिडियो प्रियंकाले आफैँ सार्वजनिक गरिन् (भिडियो हेरौँ) (1093)
कोहलपुर दु’र्घट’ना अपडेट : ५ को मृ’त्यु (952)